ARGHAKHANCHI TIMES: अर्घाखाँचीका (अर्घाखाँची ! देश-बिदेशमा तिहार) फोटोहरु भाग- १२१
अर्घाखाँचीका (अर्घाखाँची ! देश-बिदेशमा तिहार) फोटोहरु भाग- १२१
अर्घाखाँची ! देश-बिदेशमा तिहार : यस वर्षको तिहार संसारभर छरिएर रहेका अर्घाखाँचीबासी नेपालीहरुले खुशी साथ मनाए, यस वर्ष अर्थात अहिले सम्म अर्घाखाँची टाईम्सले राम्रा- नराम्रा लगायत अनेकौ समाचार प्रकासित गर्‍यो । तर दु:खको समाचार अनुसार हंसपुरको कमेरपानीमा आइतबार भएको बस दुर्घटना कम्तिमा १७ जनाको ज्यान गयो, अहिले अर्घाखाँची शोकमा छ । यस्ता दु:खका घटना अब देखि नहुन। यस्ता बारम्बार हुने अनेकौ दुर्घटना रोक्न सबै पक्षको समयमै ध्यान जाहोस्।
यसैगरी यस वर्षको तिहार अर्घाखाँची लगायत देश , विदेशमा रहेका अर्घाखाँचीबासीले रमाइलो साथ मनाए, हामीलाई पनि तिहार सम्बन्धी अनेक समाचार, तस्बिरहरु प्रकासित गर्न अनुरोध आईरहेका छन। यस्तै गरी रमेश के.सी ,हाल न्यू दिल्ली ले अर्घाखाँचीमा लिएका तस्बिर पठाउनु भएको छ भने राम बहादुर भाट, रोम,नमराज भुसाल अर्घा मिर्लिङ्कोट हाल कतारले पनि हामीलाई केही तस्बिरहरु पठाउनु भएको छ । प्राप्त केही तस्बिर झलकहरु: -
Posted by THE TIMES OF ARGHAKHANCHI at 4:25 AM